Wararka - Xieyanshi Abrasives waxay la shaqeysay Comac!
Xieyanshi Abrasives waxay la shaqeysay Comac!
Waxaan kugu hambalyeynayaa iskaashigan. Gorgortan dheer iyo kormeer kadib, Shanghai Xieyanshi Abrasives ayaa ugu dambeyntii dhaaftay COMAC'S (Shirkadda Diyaaradaha ee Ganacsiga ee Shiinaha Ltd) baaro adag oo xaqiijiso, noqo midkood alaab-qeybiye lagu kalsoon yahay. Rumayso XIEYANSHI waxay la yeelan doontaa iskaashi qoto dheer iyaga abrasives-A720T, B322, L911 iwm.
Mr Chen, madaxweynaha shirkadda Xieyanshi abrasives, ayaa hadda la saxeexday qandaraaska shirkadda COMAC ee CIIE (tHE 3RD China International Import Expo)
(Mr Chen, oo ag fadhiya gabadha marwada midabka casaanka leh).
Shirkadda Diyaaradaha ee Ganacsiga ee Shiinaha, Ltd. (COMAC) waxay u shaqeysaa sida gaariga ugu weyn ee laga fuliyo Shiinaha barnaamijyo waaweyn oo rakaab ah. Waxaa sidoo kale loo xilsaaray qorsheynta guud ee horumarinta qadka iyo barnaamijyada diyaaradaha gobolka iyo xaqiijinta warshadaha diyaaradaha rayidka ee Shiinaha. COMAC waxay ku hawlan tahay baaritaanka, soo saarista iyo tijaabinta duulimaadyada diyaaradaha rayidka ah iyo waxyaabaha la xiriira, iyo sidoo kale suuqgeynta, u adeegida, kireynta iyo howlaha diyaaradaha rayidka ah.
Shanghai xieyanshi Abraisves Co Ltd (XYS) waa soo saare xirfadle ah oo loo yaqaan 'abrasives', badeecooyinka waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa gawaarida, diyaaradaha, qoryaha ... tayada iyo adeegyadu had iyo jeer waa mudnaanta.
Ku soo dhawow wixii weydiimo ama muunad ah ee aad naga codsato. Pls waxay xor u tahay inaad nala soo xiriirto haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato alaabteenna.